Hel taageero (Somali) – Tjejzonen
Miyaad ku cusubtahay Iswiidhan oo u baahantahay gabar Walaal weyn ah oo ku taageerta oo aad la hadasho?
Aaga gabdhaha waxaad adigaaga gabar ah una dhaxaysa 10-25 sano ka heli kartaa gabar Walaal weyn ay oo ku dhageysata kuna taageerta. Walaasha weyn waa gabar in yar kaa weyn adiga oo si tabaruc ah isku xil-qaantay xilligeeda firaaqaha. Iyadu waxay ku hadli kartaa iswiidhishka oo badanaa waxay xitaa taqaanaa luqado kale sida tusaale ahaan carabida, soomaaliga, tigrinya ama daari.
Maxaad la samayn kartaa Walaashaada weyn?
Adiga iyo Walaashaada weyn waxaad kulmaysaan labadii toddobaadba hal mar muddo hal sano ah oo waxaad wada samaynaysaan waxyaabo kala duwan. Idinku tusaale ahaan waad soo lugeyn kartaan, qaxwaynaysaan, tegaysaan maktabada ama wada samayn kartaan hawl kale – adiga ayaa go’aaminaya!
Aaga gabdhaha waxaa waajib nagu ah xog qarinta shaqada. Tani micnaheedu waa in wax kasta oo aad sheegtaa aanay anaga na dhaafayn. Taageero oo dhan waxaad ku helaysaa bilaash.
Ma doonaysaa inaad ogaato dheeraad?
Haddii aad hayso su’aalo ama aad isweydiinayso wixi ku saabsan in la helo Walaasha weyn, fadlan la soo xiriir Dounya Belmhamdi oo laga helayo dounya.belmhamdi@tjejzonen.se
Sii gudbinyo fiican
Haddii aad hayso su’aalo ama aad isweydiinayso wixi ku saabsan galmada, caafimaadka ama xiriiryada waxaad dheeraad ka akhrin kartaa youmo.se. Halkan waxaa ku jira warbixino ku dhowr luqadood ah oo ay ka mid yihiin soomaaliga, tigrinya iyo carabida.
La kulan mid ka mid ah gabdhaha Walaalaha weyn ah
Showit Kidane waa Walaalaha weyn ee jooga Aaga gabdhaha. Iyadu waxay ku hadashaa iswiidhishka, ingiriisida iyo tigrinya. Halkan waxay kaga sheekaynaysaa sababta gabar Walaal weyn ahi ay u ahaan karto taageero fiican:
Anagu ma u joogno halkan inaanu kugu hagno ”nolol sii fiican”, isku dayno inaanu ”ku badbaadino” sinnaba. Anagu ma ka hadalno wixi ku saabsan wax adigu aanad doonayn inaad ka hadasho, anagu ma samayno wax adigu aanad doonayn inaad samayso. Arrintani waxay ku saabsantahay adiga ee maaha anaga. Anagu waxaanu kugu dhageysanaynaa oo kugu taageeraynaa shuruudahaaga. Anigu waxaa kale oo aan oran lahaa in waayo aragnimo aan ku ogahay in waxyaabo badan sii sahlanaadaan marka qofku erayo ku cabiro dareemadiisa. Wax kasta oo ay tahayba. Mararka qaarkoodna waxaa fududaan karta in lala hadlo qof aan kuu dhaweyn.